Ungawonga Kanjani Amandla Nokwehlisa Imfucuza Njengomqashi - Isikhungo se-EcoTechnology
Sonke sifuna ukwenza ingxenye yethu ukunciphisa i-carbon footprint ngandlela thile, kepha uma ungenalo ikhaya lakho, yini ongayenza ukusiza? Sihlanganise izinto ezi-3 ezisheshayo abaqashi abangazenza ukuze baphile kahle futhi benze umehluko!
Thola Ukuhlolwa Kwezamandla Ekhaya
Enye yezindlela ezinhle zokuqala ukonga amandla ukuhlela i-Home Energy Assessment (HEA) ngayo IMisa Londoloza, noma Izinsizakalo Zokuvimbela Ukulahlekelwa Kwamandla Ekhaya (USIZA) uma uhlala edolobheni ngezinsiza zikamasipala. Uma ukhokha isikweletu sosizo esifundazweni saseMassachusetts, ufanelekile ukuthola i-HEA. Le nqubo ifaka ukuthi kube nochwepheshe wamandla eze ekhaya lakho, noma ahlangane nawe cishe, futhi ahlole ukuthi kuphi ekhaya lakho (eliqashiwe noma eliphethwe) lapho kunamathuba okonga amandla. Lokhu kuzokusiza ukuthi wonge amandla, uthuthukise induduzo, futhi wehlise nezindleko zokusetshenziswa. Ngenkathi ungathola i-HEA yamahhala ngaphandle kwemvume yomnikazi wendawo, kusengumqondo omuhle ukungena nomninikhaya ngaphambi kokuba uqale le nqubo.
Ngesikhathi se-HEA, uzothola izindlela zokonga ngokushesha ezingabizi. Lokhu kungafaka izinto ezifana nama-light light e-LED, amapheshana kagesi athuthukile, ama-showerheads aphansi, nokuningi. Konke lokho kungaholela ekongeni ukonga amandla inyanga ngayinye!
Isazi sakho samandla sivame ukuncoma ukuthuthukiswa kwamandla okungenziwa esakhiweni sekhaya lakho. Kodwa-ke, ngaphambi kokuthi ungeze noma yikuphi ukwahlukanisa noma ukuthuthukisa imishini emikhulu noma imishini ye-HVAC, umninindlu wakho kuzodingeka abambe iqhaza ekwamukelweni nasekuhlanganiseni inqubo.
Ngokwengeziwe, amakhasimende kuphela ahlala ekhaya lamayunithi angu-1-4 alungele i-HEA yokuhlala. Uma uhlala esakhiweni esinamayunithi angaphezu kwamahlanu, ungadlulisela umnikazi wesakhiwo sakho noma umphathi wezakhiwo Uhlelo lwe-CET's multifamily noma shayela ku-855-472-0318. Amakhasimende ahlala ezakhiweni ezinamayunithi angaphezu kwe-1-4 asafanelekile ukuthola izindlela zokonga ngokushesha nezinye izinzuzo zohlelo. Hambisana nenhlangano yakho ye-condo noma abaphathi bempahla ukuze uqalise. Thinta insiza yakho noma iMisa Gcina ukuze ufunde kabanzi mayelana nokuthi ungazithola kanjani lezi zindlela zokonga amandla.
Ukuze uhlele i-HEA, ungashayela iMisa Gcina ku-866-527-7283, USIYILE ku-888-333-7525, noma ugcwalise Ifomu lokuxhumana le-CET's Home Energy Assessment.
Shintshela kumandla avuselelekayo
Njengomqashi, kufanele ukhokhele uhlobo oluthile lokusetshenziswa. Uma ukhokhela ugesi, khuluma nomhlinzeki wakho wezinsiza mayelana nokushintshela kumandla avuselelekayo, noma uye kuwebhusayithi yedolobha lakho ukuze ubone ukuthi yini abangayinikeza. Amadolobha amaningi anikela Ukuhlukaniswa kokukhethwa komphakathi, ekuvumela ukuthi uthenge amandla avuselelekayo kubhili yakho ekhona kagesi, imvamisa ngokulondolozwa kuze kufike ku-10%.
Enye inketho yabahlali baseNew England yiGreen Energy Consumers Alliance Uhlelo lwe-Green Powered. Le nketho ifana nokusetshenziswa kwakho kukagesi namandla aqinisekisiwe avuselelekayo ukuqinisekisa ukuthi ukuthenga kwakho kusiza ngempela ukuthola amandla avuselelekayo kugridi yamandla. Kunezindleko ezincane ezengeziwe zanyanga zonke, ezitshalwa ukuze kuthuthukiswe ingqalasizinda yamandla avuselelekayo esifundeni. Iphrimiyamu yanyanga zonke yalolu hlelo idonswa ngentela.
Kodwa-ke, qaphela abanye abahlinzeki abangahle bangaphakeli amandla aluhlaza njengokuthembisa kwabo. Lokhu esihlokweni kusuka ku-National Audubon Society kuyinsizakusebenza enkulu yokwenza ukushintshela okuhle kumandla avuselelekayo. Ungathola futhi imininingwane eminingi mayelana nezinketho zomhlaba wonke ngokusebenzisa i- Ukubumbana KweMelika Kwabahlinzeki Bamandla Okuncintisana.
Enye indlela abaqashi abangashintshela ngayo kumandla avuselelekayo ukusebenzisa umphakathi welanga, evumela abakhokhi bentela ukuthi babhalisele kubahlinzeki bamandla elanga abaphethwe endaweni. Ungathola uhlu lwabahlinzeka ngemisebe yelanga eMassachusetts lapha.
Xhumana ne-CET ku-413-341-0418 noma cet@cetonline.org ukufunda kabanzi mayelana nezinketho zamandla avuselelekayo.
Umquba Wokunciphisa Ukusingathwa
Enye indlela ongaba nomthelela omuhle ngayo kwezemvelo efulethini lakho ukunciphisa imfucuza yakho! Enye yezindlela ezilula zokwenza lokhu ukufaka umquba wakho wokudla. Ukwenza lokhu kube lula kakhulu, nokugcina iphunga liphansi, gcina imvuthuluka yokudla kwakho esikhwameni sephepha esinsundu noma Umqoqi womquba wasekhishini bese uyigcina efrijini lakho. Lapho isikhwama sakho sesigcwele, thola isiza sokuquba lapho ungathelela khona umquba. Akunamanzi kuyinsiza enkulu engakusiza uthole indawo eseduze nawe. Kungase kube khona izinsizakalo zokuqoqa umquba endaweni yangakini. Lezi zinkampani zizoqoqa udoti wakho wemvelo emigqonyeni eziyinikezayo, kanti ezinye zize zibuyisele imigqomo egcwele umquba ophelile ongayisebenzisa!
Uma kungekho zindawo zokwehlisa noma izinsiza zokulanda eduze kwakho, ungazama lindokuhle! Le yindlela enhle yokwenza umquba ngaphakathi kwekhaya lakho ngosizo lwezibungu. Izikelemu ezibomvu ezingaguqula ukudla kwakho kube umquba emgqonyeni ongenamphunga. Lo mkhiqizo ophelile uzohlinzeka ngokuchitshiyelwa kwenhlabathi okubalulekile okungasiza utshani bakho, ingadi, nezitshalo zakho zikhule futhi zikhule.
Ungasebenzisa futhi i- umgqomo welanga wokufaka umquba, uma unesikhala sakho sangaphandle! Lokhu kudinga umzamo owengeziwe, kepha uthola umvuzo wokwenza umquba wakho wemibhede yezimbali noma izitshalo ezinamanzi.
Ukuze uqhubeke nokunciphisa i-carbon footprint yakho njengomqashi, cabanga ngalezi ezinye izinyathelo ezilula:
Sula izingubo zakho usebenzisa i-racking dryer esikhundleni sokusebenzisa isomisi. Izomisi zezingubo ziphethwe mayelana ne-6% yokusetshenziswa kwamandla okujwayelekile kwekhaya. Ukomisa izingubo zakho emoyeni kunganciphisa umkhondo wekhabhoni wasekhaya nge 2,400 amakhilogremu ngonyaka.
Sebenzisa umucu wamandla we-smart plug izinto zakho zokusebenza. Lapho amadivayisi engasebenzi futhi esemodini yokulinda, la mapheshana kagesi ahlakaniphile angakwazi usike ugesi futhi uholele ekongeni amandla.
Sebenzisa i-thermostat ehlelwe ukusindisa amandla nemali. Ngokusho kwe-Energy Star, uma isetshenziswa kahle, i-thermostat ehlelwe kahle ingonga cishe u- $ 180 ngonyaka.
Faka ama-light incandescent light akho ngama-LED. Ukukhanya kwe-LED kusebenzisa 75% amandla angaphansi kunokukhanya kwe-incandescent.
Thatha izikhwama zakho zokuthenga ezingasebenziseka futhi lapho uya esitolo.
Sebenzisa izigqoko esikhundleni samathawula wephepha ukunciphisa imfucuza. Amathawula wephepha alahliwe aholela Amathani ayizigidi ezingama-254 kadoti minyaka yonke emhlabeni jikelele. Cabanga ngokunye ukufaka esikhundleni esivuselelekayo ukukusiza unciphise imfucuza.
Uma ufuna imoto entsha, cabanga ukuthuthukela emotweni kagesi. Kunezinhlelo ezahlukahlukene ezingakusiza ukuthi uthuthukisele isephulelo, njenge Shayela Okuhlaza Uhlelo oluvela ku-Green Energy Consumers Alliance.